Isu Takagadzirwa kuSpain - Spain neShoko re5
Iko nguva dzose nguva yakanaka yewaini tsvuku kana rosé, asi zuva uye zvinopisa kupisa kwe
Mazano ekupa waini pazuva raBaba
Zuva rababa rava kusvika uyewo mukana wedu wekupa chiratidzo chiduku chekuonga kumurume
Vinos del Bierzo, Dhiyabhorosi Yakatangira mafashoni munyika
Mazambiringa eSpain eByerzo anowanzowedzera munyika yose, uye haisi fad
Aceites Camino de Aníbal, Gourmet Quality kubva kuAbbacete
Hannibal aiva mukuru weCarthaginian, anozivikanwa pakuve mumwe wezvakanakisisa zvekare munhoroondo, uye kunyanya nokuda kwake
Posted On 21 March, 2019 21 March, 2019 By HBkomenda
Iko nguva dzose nguva yakanaka yewaini yakaisvonaka kana rosé, asi zuva uye zvinokonzera kupisa kwechitsime zvakatanga nhasi zvinopa waini inotonhorera pakati pezvakanakisisa. Uye ndeyekuti kudya kwezuva neshamwari, mupfumi 22 - 24 madigiri uye negirazi reAlbariño zvechokwadi Ramba uchiverenga
Category: Wineries/Uncategorized/Wines kubva kuSpain
Posted On 12 March, 2019 12 March, 2019 By HBkomenda
Zuva rababa rava kusvika uyewo mukana wedu wekupa chiratidzo chiduku chekuonga kune munhu anokosha kupfuura vose muupenyu hwedu. Munhu iyeye aigara aripo nesu uye ndiani anoreva isu zvose uye pachedu. Imhare, pose paunotarisa. Ramba uchiverenga
Category: Wines kubva kuSpain/Kutarirwa kushanya kuSpain
Posted On 16 February, 2019 16 February, 2019 By HBkomenda
Spanish Bierzo wines inowedzera mukudiwa munyika yose, uye haisi fad sezvinoti musoro unoti. Mencía mazambiringa marshals akazviwana zvichibva pakuziva-kwavakaita sei kwezvizvarwa. The Vinos del Bierzo inoratidzirwa nehuwandu hwemasimba, zvikuru Ramba uchiverenga
Posted On 29 January, 2019 16 February, 2019 By HBkomenda
Hannibal aiva mukuru weCarthaginian, anozivikanwa pakuve mumwe wezvakanakisisa zvidzidzo munhau, uye kunyanya pakupfuura kwake nePyrenees nenheve dzake. Aceites Camino de Aníbal inotora zita rayo nokuti nyika iyo inokura minda yayo yemiorivhi iri mumugwagwa iyo yakakurumbira African inotora Ramba uchiverenga
Posted On 15 January, 2019 16 February, 2019 By HBkomenda
Mune Municipality pamusoro Cedrillas turolense vanenge 35 makiromita kubva guru Teruel, nyika yashambidzwa paRwizi Mijares, yemaguta Teruel akarapa hamu uye dzimwe nyama yenguruve munharaunda. Hams fair, mumiririri muchiso pamusoro Cedrillas Sierra SL, yava kure amene nevamwe vaburitsi munharaunda Ramba uchiverenga
Posted On 14 January, 2019 16 February, 2019 By HBkomenda
Nhoroondo yeimba iyo iye zvino inowanzoitwa Bodegas Pradorey yakadzokera kumazana ekutanga kwezana remakore rechitanhatu, apo mazita akaiswa mumaoko aIsabella muKaturike, uye gare gare vakazova zvekurima nemombe, nguva dzose vachigara muhupfumi, kusvikira zana remakore rechi20 rinova pfuma yega pachedu kusvikira Ramba uchiverenga
Posted On 9 January, 2019 16 February, 2019 By HBkomenda
Necker Island ndiro zita rechitsuwa chekunze chebhandi reBillionaire Richard Branson, iri munzvimbo yeVirgin Islands, uko iyi yeChitatu iri mhirizhonga Irma yakapfuura ichiparadza zvose mumugwagwa wayo. Inofanira kuonekwa kuti Irma, chikwata 5 dutu pa 5, ndeimwe yei Ramba uchiverenga
Posted On 7 January, 2019 16 February, 2019 By HBkomenda
Mumuguta weValdepeñas, muCiudad Real, vane zana remakore zana Bodegas Navarro López. Kuberekwa sebhizimisi remhuri, iri pamagumo e80 apo inotengwa nemutungamiriri wezvino, kupa ruzivo rwakakura mune mutemo we winery uye kubheta zvikuru pamusoro pehutano uye chete. Mapiyona e Ramba uchiverenga
Kugamuchirwa Takaitwa muSpanish Magazine, iyo nzvimbo yaunowana zveruzhinji pamusoro peGourmet michero yakanakisisa muSpanish yakadai sewaini, cheeses, Iberian, maorivhi, nezvimwe. Nzvimbo dzinoshamisa dzinoshanyira, varidzi vadzo, zvakanakisa kukurudzirwa, zvinotamba paGran Vía nezvimwe zvakawanda. Takaitwa muSpanish Ramba uchiverenga
Tsvaga Yakagadzirwa muSpain! Nzvimbo yako yekutengesa yepaIndaneti yemagetsi eSpain Shipments kune vose veEurope
Iyi webhusaiti inoshandisa makiki kuitira kuti uve nechokwadi chokuti iwe unowana ruzivo rwakanakisisa pawebsite yedu.
A cookie iri faira kana chikwata chinoshandiswa kumashini ekugadzirisa emushandisi kuitira chinangwa chekuchengetedza dheta inogona kugadziriswa uye inotorwa nesangano rinotarisirwa kuiswa kwayo. Iko ndiko, iyo faira inotorwa kune kombiyuta yako kana iwe uchiwana mamwe maWebhu. Majiki anobvumira peji pewebhu, pakati pezvimwe zvinhu, kuchengeta nekuwana mashoko pamusoro pemitemo yekushandura yemushandisi kana midziyo yavo uye, zvichienderana nemashoko atinayo uye nzira iyo vanoshandisa nayo midziyo yavo, vanogona kushandiswa kugamuchira kumunhu
Ndeupi rudzi rwekiki ino web site ino inoshandisa?
Iyi webhusaiti iri kushandisa makiki anobvumira vashandisi kushandisa nekufamba kuburikidza naro, vanoita kuti huve nehumwe humwe hutano, nekuvandudza kushandiswa kwebasa rewebsite.
Kunyanya, iyi webhusaiti inoshandisa makiki anotevera:
Kuongorora maCoco: Aya makiki anoshandiswa kuita shanduko yemafambiro nemaitiro evashandisi veWeji peji uyewo nekugadzirisa kwekufambisa zvinyorwa kuitira kuti kuve nekuvandudzwa kwehupenzi mukushanda uye kushanda.
Shanduro yatinoshandisa kugadzirisa aya makiki ndiyo nzvimbo yeGoogle Analytics (www.google.com/analytics/)
Nzira yekugadzirisa sei masikisi ekiki?
Muchikamu chino mharidzo pfupi yekutarisana nekuita nekugadzirisa kwehutano uye makiki maererano nevanowanzoshandiswa kana kuti zvakanyanya kushandiswa zvinoitwa.
Nenzira iyi, zvinoshandiswa nevashandisi vose vanobvumira mutengi kuwana ruzivo rwezvekakisi yakakonzerwa nejiji yewebhu, kunyanya kuratidza kuti kune humwe chete, nguva yavo kana kuti kuregera. Nenzira iyi, nekuda kwezvikonzero, ruzivo rwehukama hunobatanidzwa runopiwa:
Uyezve, inodzidzisa anogona kubvumira, nechigumbuso kana zvinomuomera kuikanganwa Cookies yakaiswa pa-computer yako kunatsiridza kwako Browser Kurongwa maererano nemirayiridzo mariri. Nokuti mashoko hwakaratidza kuti kazhinji kudzayi Kurongwa kazhinji kuitwa mu "Zvaunogona" Muterere kana "Tools" mumwe Browser, chero zvazvingava, unogona kuenda browser kubatsira kugadzirisa kana solventas nechokwadi izvo zvichaita vaunze kuremekedzwa.
Zvakakosha kuzviyeuchidza mupfungwa, kuti kana kuiswa kwekiki dzose kunodzivirirwa, zvinyorwa zveWebhu pamwe nemamwe mabasa uye zvigadzirwa zvinopiwa nazvo zvingave zvakakanganiswa.